प्रधानमन्त्रीलाई नारायणकाजीको प्रश्न : 'नक्सा छाप्न नमान्ने, अहिले त्यसैलाई बेच्ने ?' | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
NAGARIKKHABAR TV २०७७ साल असार २५ गते, बिहीबार
२०७७ साल असार २५ गते, बिहीबार
सरिता गिरी पदमुक्त भएको संसद सचिवालयको जानकारी
दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना संक्रमित बढ्यो
शान्ति सुरक्षा अनिवार्य शर्तः गृहमन्त्री थापा
पर्यटन व्यवसायी कँडेलद्वारा छ लाख घरभाडा छुट
चिनियाँ वैज्ञानिकले भने, 'वुहानमा भन्दा पहिले युरोपमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि'
access_time43 minutes ago
सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा भएको जनधनको क्षतिप्रति उपराष्ट्रपति पुनद्वारा दुःख व्यक्त
जसपाले औपचारिक रुपमा पायो राजनीतिक दलको मान्यता
सिन्धुपाल्चोक पहिरोः मध्यभोटेकोशी हाइड्रोमा क्षति
कर्णालीमा प्रदेशमा थपिए ११ कोरोना संक्रमित
कोरोना कहरः अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा छ हप्ते लकडाउन सुरु
पर्यटकका लागि पदमार्ग निमार्ण
प्रधानमन्त्रीलाई नारायणकाजीको प्रश्न : 'नक्सा छाप्न नमान्ने, अहिले त्यसैलाई बेच्ने ?'
access_time२०७७ साल असार १६ गते, मंगलवार ०७:४९ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा छाप्न नमानेको खुलासा गरेका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विभिन्न समयमा बसेका बैठकमा ओलीले नक्सा छाप्न नहुने तर्क गरेको खुलासा गरेका हुन् ।
नक्साका विषयमा बैठकलाई जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, 'पहिले अध्यक्ष ओलीले नक्सा प्रकाशन गर्नका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा मान्नु भएन । नीति तथा कार्यक्रममा पनि उहाँले राख्न मान्नु भएन । त्यहीँ दिन हामीले चर्को दबाब दिएपछि मात्र नक्सालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्न तपाईँले त्यहीँबाट मुख्यसचिवलाई फोन गर्नु भएको हैन ? यस्तो झुटो कुरा गर्ने ?'
प्रधानमन्त्रीको मदन जयन्तीका दिन दिएको अभिव्यक्तिमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने, 'नक्सा छापेपछि भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने ? तपाईँको राजीनामा वैशाख १७ कै बैठकमा उठेको थियो । त्यो बेला के तपाईँ नक्सा छाप्न तयार हुनुहुन्थ्यो ? नक्सा छाप्न पनि तपाईँ नमान्ने अनि आफ्नो अनुकुल भएन भनेर अन्य नेतालाई जे पनि भन्ने ? यो जिम्मेवारी भएन ।'
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पनि असहमति जनाए । उनले भने, 'भारतले तपाईँलाई हटाउन खोजेको हो भने भारतीय राजदूतलाई प्रष्टिकरण किन सोध्नु भएन ? तथ्य हो भने देशबाट निष्कासन पनि गर्नुपर्छ । तपाईँले त्यो काम किन गर्नु भएन ? आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक र परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति घोर आपत्ति जनक छ । यसले राष्ट्र र पार्टीलाई नोक्सान पुरायो ।'
सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमै ओलीमा समस्या देखिएको बताउँदै श्रेष्ठले वैचारिक स्पिरिटबाट चिप्लिएर भ्रष्टिकरणतर्फ गएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'वैचारिक स्पिरिटबाट नेतृत्व भ्रष्टिकरणतर्फ गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा विधि, पद्दती, आत्मालोचना हुँदैन । नेतृत्वले ब्रमज्ञानी प्रवृत्तिमा पुग्यो । त्इस्तो अवस्थामा सत्रु र दासमात्र भेट्ने समस्या हुन्छ । उहाँले कामरेड भेट्नु हुन्न ।'
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : ओली-प्रचण्डदेखि नारायणकाजीसम्म कसले के भने ?
प्रचण्डले बैठकमा ओलीलाई भने, 'भारतीय राजदूतलाई बोलाएर प्रष्टिकरण किन लिनु भएन ?'
नेकपा बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई भने, '३२ वर्षदेखि अध्यक्ष बन्नु भयो, अझै पुगेन ?'
झलनाथले ओलीलाई भने, 'तपाई जथाभावी गर्दै र बोल्दै हिड्नुभयो, अब राजीनामा दिनुस्'
माधव नेपालले ओलीलाई भने, 'यो पार्टी हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाएको हो, चेतना भया !'
वामदेवले बैठकमा भने, 'केपी ओलीले नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो, छानविन गर्नुपर्छ'
निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि आवेदन
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको चौथो दिन : बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले के भने ? (भिडियोसहित)
पत्रकार महासंघको भन्यो- जी न्युजले पीत पत्रकारिता गर्‍यो
भारतीय सञ्चारमाध्यमबारे प्रवक्ता श्रेष्ठकोे टिप्पणी- हद भयो, बकवास बन्द गर
कसैले बर्दीमा दाग लगाउने कोसिस गरे निर्मम कारबाही हुन्छ : महानिरीक्षक क्षेत्री
नवनियुक्त आइजिपी शैलेश थापाले लगाए दर्ज्यानी चिन्ह (फोटो फिचर)
सिन्धुलीको कमला नदीमा साढे ६६ करोडमा यस्तो पुल (भिडियो)
कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन